Hidden Spy Pen Video Camera - Diiwan ilaa 90Mins, SDCard 32GB Max (SPY008) | Xalka OMG
Wo Modes: Habka 1 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawir qaadato si xor ah oo aad uqorto dhawaaqyada si sahlan loogu keydiyo kaadhka sd, u beddel qaabka 2 ee duubista fiidiyowga iyo keydka kaararka sd. U fiirso dhammaan feylkaaga si sahal ah ee kaadhkan, isticmaal karti akhristaha, ama kaliya qalinka geli qalabka kombuyuutarka.
Maya Software: qalinka casrigan waa labadaba PC iyo Mac u dhigma. Taariikhda taariikhda ayaa lagu dari karaa adigoo tixraacaya tixraacyada tixraaca ee sawirada ama sawirada, sidaas darteed abaabulidda xogtaadu waa jilicsanaan. Qalabka qalabka casriga ah waxaa lagu sameeyaa u hoggaansanaanta heerarka wax soosaarka ugu sareeya.
Heerka sare ee sawir iyo muuqaal: Full HD 1920x1080p loogu talagalay VIDEO & 2560X 1920P ee loogu talagalay PHOTO. Full HD 9712 Lens, XAUMX mega pixels, qalabka wuxuu gaaraa heerka buuxa ee HD. Kaliya hal guji iyo hal guji ayaa kuu ogolaanaya inaad bilowdo / joojiso fiidiyowga duubista isla markiiba.
Battery: Dhamaanteena dhismaha, 100% cusbooneysiin, batari sare oo batrool ah (DC-5v) ayaa daboolaya qalin kasta oo kale oo la heli karo. KA HELI KARO MARKA AAD KA BEDDELAYO QURMADA.
Tani waa qalin aan caadi ahayn. Haa looma isticmaalo oo keliya qorista, laakiin sidoo kale DVR-da (Dijital Recorder) oo leh kamarad HD ah oo loo isticmaali karo in lagu qabto / abuuro sawiro iyo fiidiyo sarreeya. Xaqiiqdii waa qalinka kamaradada casriga ah kaas oo ah mid caan ku ah kormeerka iyo qabashada xaalad kasta ama sida hadiyad qurux badan.
Raadinta Sawirada Qalinka Maskaxda HD 1080p HD
Qaadista / Calaamadaha Kabista ee USB
Halkaan gacanta ku hayso Muuqaalka Maqalka si aad filim u sameyso xitaa haddii aadan joogin
Waxay bixisaa 60 - daqiiqo 90 waxqabadka duubista digital.
xasuusta: Taakuleynta kaararka taageerada kaararka micro SD / TF 32GB
Isticmaal sawirrada, muuqaalka, ama sida hannaanka la kaydin karo.
Waxaa ka mid ah Wareeginta Dheeraynta / Calaamadaha Kabista ee USB.
Nooc USB ah: Dekedda caadiga ah ee USB.
Nidaamka taageerada: Taageerada WINDOWS98 / 98SE / ME / 20000XP / MAC OS / LINUX oo si toos ah u kala saar nidaamka qalliinka, ku rakib wadida wadooyinka, uma baahnid inaad ku rakibto gacanta (marka laga reebo WINDOWS98).
SPY008 - Sawirka Sawirka Sawirka
1875 Wadarta Views 9 Views Maanta